Daawo: Safaarada Soomaliya ee Dalka Kenya oo Deeq Gaarsiisay Xabsi ku yaala Duleedka Magaala….. | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Safaarada Soomaliya ee Dalka Kenya oo Deeq Gaarsiisay Xabsi ku yaala Duleedka Magaala…..
Monday October 10, 2016 - 6:36 under Somali News by Tifaftiraha K24
Qunsulka Saafaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, Cali Maxamed Sheekh “Cali Bagadi” ayaa booqasho oo uu ugu kuurgalaayo xaalada maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Kenya waxa uu ku tagay xabsi ku yaal duleedka magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya.
Qunsulka ayaa intii uu booqashada ku joogay xabsiga waxa uu qaar ka mid ah maxaabiista gaarsiiyay deeq isugu jirtay dhar iyo lacago, taas oo loogu talo galay in moraalka loogu dhiso 11 maxaabiis oo dhameysatay 9 sano oo xabi ah.
Qunlsulka oo ugu horeyn kulan la qaatay Saraakiisha Xabsiga ayaa kadib waxa uu kormeeray halka ay ku xir xeranyihiin maxaabiista oo ka wareystay xaaladooda nololeed iyagoona safaarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya uga mahad celiyay ka warqabka mudadii ay xirnaayeen.
Qaar ka mid ah maxaabiista Soomaaliyeed ee uu u dhamaaday waqtigii lagu xakumay iyo kuwa ay mudo kooban u harsan tahay ayaa waxa ay qunsulka iyo masuuliyiinta safaarada uga mahadceliyeen deeqda dharka iyo lacagta ah ee la soo gaarsiiyay.
Qunsulka Safaarada Soomaliya Cali Maxamed Sheekh “Cali Bagadi” oo gudaha xabsiga kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in safaarada Soomaaliya ay ka warqabi doonto xaalada maxaabiista ku xiran gudaha dalka Kenya, waxa uuna maxaabiista ugu baaqay in ay ka waantoobaan waxyaabaha keeni karo in tacadiyo kala duwan loo geysto inta ay ku jiraan xabsiyada si aysan Qatar u soo gaarin xaaladooda.
Safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa intabadan waxa ay maxaabiista soo dhameysatay xukunnada kala duwan ka gacan siisaa haqabtirka waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha, si ay dhiiro galin ugu noqoto.